ခရီးသွားတဲ့အခါ ငပိန်းတစ်ယောက်လို မဖြစ်ရအောင်
HomeTravelခရီးသွားတဲ့အခါ ငပိန်းတစ်ယောက်လို မဖြစ်ရအောင်
ခရီးထွက်တယ် ခရီးထွက်တယ်နဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ Tour တွေနဲ့ပဲ သွားဖြစ်နေတာ မမိုက်ပါဘူးကွာ။ တကယ့် ခရီးသွားရတဲ့ အရသာဆိုတာ အဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ Tour နဲ့သွားမယ်ဆို သူတို့ပို့တဲ့နေရာပဲရောက်မယ်၊ သူတို့ပြောတာပဲ နားထောင်ရမယ်။ တကယ့်အသစ်အဆန်းတွေကို မရနိုင်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်ခရီးထွက်မှ ခရီးသွားခြင်းအနှစ်သာရစစ်စစ်ကိုရမှာ။ ခရီးထွက်တဲ့အခါ ငပိန်း တစ်ယောက်လိုမျိုး ဘာမှမသိလိုက်ရတာမျိုး၊ အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုး မကြုံချင်ရင် ဒါတွေကိုမှတ်ထားဦးနော်။
ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို သိပြီဆိုရင် အသေးစိတ်စုံစမ်းထားရမယ်။ ဥပမာ အဲ့ဒီဒေသမှာ တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေ၊ ထူးခြားမှုတွေကိုပေါ့။ ဘယ်ခရီးနဲ့သွားမလဲ? ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာတွေလည်း တွက်ထားရမယ်။ ဖုန်းလိုင်းမိရဲ့လား၊ ဘယ်လိုင်းတွေမိလဲဆိုတာပါ စုံစမ်းပါ။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးသွားပါ။ ဒါမှ အထုပ်သယ်ရတဲ့ဒုက္ခကနေ ဝေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး သယ်သင့်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေ၊ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို မသယ်ဘဲနဲ့လည်း မသွားနဲ့ပေါ့နော်။ အထုပ်ပြင်တော့မယ်ဆို လိုမယ့်ပစ္စည်းတွေကို အရင်စာရင်းလုပ်ထား၊ စာရင်းအတိုင်း ထုပ်ပြီး ပြန်စစ်ရင် ကျန်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။
ခရီးသွား တယ်ဆိုရင် သူများတွေ သွားနေကြနေရာတွေကိုပဲ သွားဖြစ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီထက်ပိုပြီး ခြေဆန့်ကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း Tour တွေနဲ့သွားတာကို အားမပေးချင်တာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ပို့တဲ့ဆီပဲရောက်မှာ။ အချိန်လည်းအေးအေးဆေးဆေး မပေးဘူးလေ။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ နေရာသစ်တွေကိုလည်း သွားလို့ရတာပဲ။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ ကိုယ့်ရဲ့ဇီဇာကြောင်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကိုတော့ နည်းနည်းလျှော့ရမယ်။ ကြယ်လေးပွင့်အဆင့်ဟိုတယ်ရှိမှတို့ စားသောက်ဆိုင်သန့်သန့်ရှိမှတို့ဆိုတဲ့ စရိုက်လေးတွေကို နည်းနည်းပြင်လိုက်မယ်ဆို သွားလုိ့ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး သက်တောင့်သက်သာ နားနိုင်တဲ့ နေရာတွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်။ သွားလိုက်ပါဦး။
ဟုတ်တယ်လေ ပိုက်ဆံမရှိရင် ဘာမှလုပ်လို့မှမရတာ။ PayPal ၊ MPU ကတ်တွေကတော့ သယ်သွားရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ငွေသားကိုလည်း ဆောင်သွားပါ။ အရေးပေါ်သုံးရအောင် ငွေသားတွေကို လူသိမလွယ်တဲ့နေရာမှာဖွက်ပြီး သယ်သွားသင့်ပါတယ်။ ခြေအိတ်ထဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
ခရီးထှကျတယျ ခရီးထှကျတယျနဲ့ တကယျတမျးကတြော့ Tour တှနေဲ့ပဲ သှားဖွဈနတော မမိုကျပါဘူးကှာ။ တကယျ့ ခရီးသှားရတဲ့ အရသာဆိုတာ အဲ့တာမြိုးမဟုတျဘူး။ Tour နဲ့သှားမယျဆို သူတို့ပို့တဲ့နရောပဲရောကျမယျ၊ သူတို့ပွောတာပဲ နားထောငျရမယျ။ တကယျ့အသဈအဆနျးတှကေို မရနိုငျဘူး။ ကိုယျတိုငျခရီးထှကျမှ ခရီးသှားခွငျးအနှဈသာရစဈစဈကိုရမှာ။ ခရီးထှကျတဲ့အခါ ငပိနျးတဈယောကျလိုမြိုး ဘာမှမသိလိုကျရတာမြိုး၊ အဆငျမပွဖွေဈတာမြိုး မကွုံခငျြရငျ ဒါတှကေိုမှတျထားဦးနျော။
ကိုယျသှားခငျြတဲ့နရောကို သိပွီဆိုရငျ အသေးစိတျစုံစမျးထားရမယျ။ ဥပမာ အဲ့ဒီဒသေမှာ တားမွဈထားတဲ့အရာတှေ၊ ထူးခွားမှုတှကေိုပေါ့။ ဘယျခရီးနဲ့သှားမလဲ? ဘယျလောကျကုနျမလဲဆိုတာတှလေညျး တှကျထားရမယျ။ ဖုနျးလိုငျးမိရဲ့လား၊ ဘယျလိုငျးတှမေိလဲဆိုတာပါ စုံစမျးပါ။
လှတျလှတျလပျလပျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးသှားပါ။ ဒါမှ အထုပျသယျရတဲ့ဒုက်ခကနေ ဝေးမယျ။ ဒါပမေဲ့ လှတျလပျရငျပွီးရောဆိုပွီး သယျသငျ့တဲ့အသုံးအဆောငျတှေ၊ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှကေို မသယျဘဲနဲ့လညျး မသှားနဲ့ပေါ့နျော။ အထုပျပွငျတော့မယျဆို လိုမယျ့ပစ်စညျးတှကေို အရငျစာရငျးလုပျထား၊ စာရငျးအတိုငျး ထုပျပွီး ပွနျစဈရငျ ကနျြစရာအကွောငျးမရှိတော့ဘူး။
ခရီးသှားတယျဆိုရငျ သူမြားတှေ သှားနကွေနရောတှကေိုပဲ သှားဖွဈကွတယျ။ အဲ့ဒီထကျပိုပွီး ခွဆေနျ့ကွညျ့ပါ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့လညျး Tour တှနေဲ့သှားတာကို အားမပေးခငျြတာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ပို့တဲ့ဆီပဲရောကျမှာ။ အခြိနျလညျးအေးအေးဆေးဆေး မပေးဘူးလေ။
ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ခရီးမြိုးမဟုတျဘဲနဲ့ သကျတောငျ့သကျသာရှိတဲ့ နရောသဈတှကေိုလညျး သှားလို့ရတာပဲ။ တဈခုတော့ရှိတာပေါ့ ကိုယျ့ရဲ့ဇီဇာကွောငျတဲ့ စညျးမဉျြးတှကေိုတော့ နညျးနညျးလြှော့ရမယျ။ ကွယျလေးပှငျ့အဆငျ့ဟိုတယျရှိမှတို့ စားသောကျဆိုငျသနျ့သနျ့ရှိမှတို့ဆိုတဲ့ စရိုကျလေးတှကေို နညျးနညျးပွငျလိုကျမယျဆို သှားလုိ့ဖွဈပါတယျ။ လုံခွုံစိတျခရြပွီး သကျတောငျ့သကျသာ နားနိုငျတဲ့ နရောတှေ အမြားကွီးကနျြသေးတယျ။ သှားလိုကျပါဦး။
ဟုတျတယျလေ ပိုကျဆံမရှိရငျ ဘာမှလုပျလို့မှမရတာ။ PayPal ၊ MPU ကတျတှကေတော့ သယျသှားရမှာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ငှသေားကိုလညျး ဆောငျသှားပါ။ အရေးပျေါသုံးရအောငျ ငှသေားတှကေို လူသိမလှယျတဲ့နရောမှာဖှကျပွီး သယျသှားသငျ့ပါတယျ။ ခွအေိတျထဲဖွဈဖွဈပေါ့။
Facts Lifestyle Travel